गीत सङ्गित |
फेसबुकका लागी ट्रिक
यहाबाट नया नौला गित सङ्गित भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ॥
तिम्रो बुबाले के काम गर्नुहुन्छ??? सेप्टेम्बर 1, 2016
लघुकथा~ ‘लुतो आयो’ जुलाई 16, 2016
गजल~इदुलफितर बिशेष जुलाई 8, 2016
के हो त यो ग्रेडिङ सिस्टम??? जुन 20, 2016
कपिलबस्तु जिल्लामा पनि हातेमालो साहित्य प्रतिष्ठानको शाखा विस्तार जुन 18, 2016
सेप्टेम्बर 2016 (1)
जुन 2016 (3)
फ्रेवुअरी 2016 (5)
जनवरी 2016 (5)
डिसेम्बर 2015 (4)
नोभेम्बर 2015 (2)
सेप्टेम्बर 2015 (2)
जुन 2015 (8)
मे 2015 (8)
फ्रेवुअरी 2015 (1)
डिसेम्बर 2014 (2)
Padam Prasad Paudel on पहिलो पटक घर छोडेर हिड्दा ( मु…
aakashpun45 on पहिलो पटक घर छोडेर हिड्दा ( मु…
paudelpadamprasad on गद्य कविता ‘दया’ २…
paudelpadamprasad on झ्याउरे लयमा ‘के गर के न…
bg on गद्य कविता ‘दया’ २…
समाचार तथा जानकारी>> (4)
साहित्यिक लेखहरु>> (18)
View paudelpadamprasad’s profile on Facebook
View padam9999’s profile on Twitter
View paudelpadamprasad’s profile on Instagram
View padam9999’s profile on Pinterest
View paudelpadamprasad’s profile on LinkedIn
View paudelpadamprasad’s profile on YouTube
दुर्घटनामा परेका पत्रकार खनालको निधन जुलाई 20, 2018
४ साउन, झापा । झापाका पुराना पत्रकार एवं साहित्यकार गोपीकृष्ण खनालको दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । नयाँ कामना साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक समेत रहेका ७१ वर्षे खनाल नेपाल पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष […]
२ किलो नक्कली सुनसहित ३ जना पक्राउ जुलाई 20, 2018
४ साउन, काठमाडौं । प्रहरीले दुई किलो नक्कली सुनसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले नक्कली सुन विक्री गर्न लागेको सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई […]
कमजोर बन्दै नेपाली रुपैयाँ जुलाई 20, 2018
४ साउन, काठमाडौं । पछल्लिो समय नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ७८ पैसा तोकेपछि नेपाली रुपैयाँ कमजोर […]
अशोक दर्जीलाई किन ‘सेन्सेसनल’ बनाइँदैछ ? जुलाई 20, 2018
विश्वकप फुटवल क्लाइमेक्समा नपुगेको, असारे झरीले भक्तपुर नडुबाएको र मार्सी चामलले पब्लिसिटी नपाएको भए निसन्देह ‘अशोक दर्जी प्रसंग’ले डढेलो लगाउने थियो । यद्यपि अहिले भर्चुअल संसारमा भित्रभित्रै यसको आगो भने […]
निजी क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढ्यो, ६१ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा जुलाई 20, 2018
४ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ११ महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र […]
बाँदरबाट मकै जोगाइदिन सांसदसँग हारगुहार जुलाई 20, 2018
४ साउन, पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा बाँदरले मकै नष्ट गरेपछि यहाँका किसान चिन्तित बन्दै गएका छन् । पहाडी जिल्ला पाल्पाको प्रमुख अन्नबाली मकैमा घोगा हाल्न थालेसँगै बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि […]
फास्ट ट्रयाकमा ६२ पुलको एउटै प्याकेज, कसले हत्याउला ठेक्का ? जुलाई 20, 2018
४ साउन, काठमाडौं । ठूला आयोजनाहरुमा फरक–फरक कामका लागि अर्बौं रकमको एउटै एउटै प्याकेज बनाउने क्रम फास्ट ट्रयाकमा पनि दोहोरिएको छ । यसरी ठूला आयोजनामा साना–साना कामहरु जोडेर ठूलो रकमको […]
बाढी र डुबानबाट मृत्युपछि पर्सामा विपद् पूर्वतयारी बैठक जुलाई 20, 2018
४ साउन, वीरगञ्ज । विपद्पूर्व पूर्वतयारीका योजनाहरु बनाउने गरिन्छ । तर अविरल वर्षापछिको बाढीले तीन जनाको ज्यान लिनुको साथै सयौं घर डुबाएपछि पर्सामा सरोकारवालाहरु तातेका छन् । केहीदिन अघि आएको बाढीले […]
विदेशिने नेपाली २० प्रतिशतले घटे, कतार र मलेसिया प्रमुख गन्तव्य जुलाई 20, 2018
४ साउन, काठमाडौं । गत वर्ष समग्रमा काम खोज्दै विदेश जाने नेपालीको संख्या झण्डै २० प्रतिशतले घटेको छ । देशभित्रै राजनीतिक स्थिरता छाएको र खाडी मुलुकहरुमा पनि आर्थिक समस्याका कारण […]
२०१९ देखि गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान ! जुलाई 20, 2018
४ साउन, बुटवल । एक वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम बल्ल ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । सन् २०१५ जनवरीमा शुरु […]
यि ३ भाइहरुले साह्रै मिठो गीत गाए, 'कहिले अरुण सुसाउने कहिले तमोर सुसाउने, यी आखाँमा अासु रसाउने' #धरानको_भानुचोकमा
INSIDE DharanISKCON Temple
Proud of being Nepalese
First year's orientation program #pastthrusday
Ready for pcb design after making the network design.
Yo mandir kahako mandir ho chinnele haat uhaum ta...